Yintoni ekufuneka ikhuliswe umntwana we-hypersensitive | Bezzia
UMaria Jose Roldan | | Fundisa abantwana
Uvakalelo yinto ezalwa emntwini. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba kukho abantu apho uvakalelo olunjalo luphawulwe ngakumbi kunakwabanye. Kwimeko yabantwana, olu luvo lukhankanywe ngasentla lucelomngeni lokwenene kubazali abaninzi.
Kwinqaku elilandelayo sikubonisa oko abazali bafanele bakwenze, ukuba bayabona ukuba abantwana babo banovakalelo oluphezulu kakhulu kunabanye abantwana.
1 Izinto abazali babantwana ababuthathaka kakhulu bafanele bazikhumbule
2 Indlela yokwazi ukuba umntwana une-hypersensitive
3 Indlela yokukhulisa umntwana one-hypersensitive
Izinto abazali babantwana ababuthathaka kakhulu bafanele bazikhumbule
Umntwana we-hypersensitive uya kubonisa ingqalelo enkulu kuzo zonke iinkcukacha kunye nezinto ezincinci ezijikeleze indawo yakhe. Bejongene noku, abazali bafanele bacinge ngokukhulisa umntwana wabo ngembono eyahlukileyo ngokupheleleyo kwabanye abantwana.
Kwimeko yabantwana abane-hypersensitive, ukulawula iimvakalelo kubalulekile kwaye kubaluleke kakhulu. Olu lawulo luvumela umntwana ekuthethwa ngaye ukuba aphephe ukubandezeleka ngenxa yokuphazamiseka okuthile okunjengokudakumba.
Indlela yokwazi ukuba umntwana une-hypersensitive
Kukho inani lemiba ebonisa ukuba umntwana unovelwano kakhulu kunesiqhelo:
Imalunga nabantwana abanjalo urhoxe kakhulu kwaye uneentloni.
Bakhulisa inqanaba lovelwano ngaphezulu kwesiqhelo.
Banexesha elinzima kunye nezivuseleli ezinamandla njengevumba okanye ingxolo.
Badla ngokudlala eyedwa.
Banezinga eliphezulu leemvakalelo kuzo zonke iinkalo.
Imalunga nabantwana uyilo kakhulu.
Imiboniso unenkxaso kakhulu kwaye unesisa nabanye abantwana.
Indlela yokukhulisa umntwana one-hypersensitive
Ukukhulisa umntwana obuthathaka kakhulu kufuneka kusekelwe ngaphezu kwayo yonke into ekumfundiseni ukulawula zonke iimvakalelo zakhe. Ukwenza oku, abazali kufuneka balandele uluhlu lwezikhokelo okanye iingcebiso:
Kubalulekile ukuba umntwana oselula azive exhaswa ngabazali bakhe. Ukuba ngumzali okanye imfundo kulula kakhulu okoko nje umntwana enokuzithemba okukhulu kunye nokuzithemba.
Uthando nothando lwabazali lumele luqhubeke. Ukususela ekuphuzeni ukuya ekuwoleni, Nantoni na ihamba ngokude nje umntwana eziva ethandwa.
Iimvakalelo kunye neemvakalelo kufuneka zivakaliswe ngalo lonke ixesha. Abazali bafanele bachaze indlela abavakalelwa ngayo ukuze ulawulo lweemvakalelo lolona lufanelekileyo.
Ngendlela efanayo, abazali bafanele babe nembopheleleko yokunceda abantwana babo bazi indlela yokuchaza indlela abavakalelwa ngayo ngokwenene. Iimvakalelo kufuneka ziphumele ngaphandle kwaye ziphephe iingxaki ezingokweemvakalelo ezinokubakho njengexhala.
Ukwazi indlela yokuphulaphula yenye inkalo ebalulekileyo ekukhuliseni kakuhle umntwana onovelwano. Oku kuphulaphula ngundoqo ukuze bazive beqondwa yaye bethandwa ngamaxesha onke.
Ngamafutshane, Ukuba nomntwana one-hypersensitive ayisosiphelo sehlabathi kuye nawuphi na umzali. Ungumntwana onovelwano ngakumbi kunabanye kwaye okwaziyo ukuziva zonke iimvakalelo zakhe ngamandla. Xa kunikwa oku, ukukhulisa umzali kufuneka kulandele uthotho lwezikhokelo ezivumela umntwana ukuba azi indlela yokulawula nokuhambisa zonke iimvakalelo zakhe ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » Kufuneka kukhuliswe ntoni umntwana ongevayo
Uqoqosho lwesetyhula kunye nokubaluleka kwayo kokusingqongileyo